July 2021 - Nepali in Australia
July 31, 2021 autherLeaveaComment on हास्य कलाकार किरण केसी ‘राता मकै’को ४० बिघा जग्गा वैद्य माओवादीद्वारा कब्जा
चितवन । माडीमा मोहन वैद्य निकट नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले आज ४० बिघा जग्गा कब्जा गरेको छ ।कलाकार किरण केसी ‘राता मकै’ लगायतको ट्वान्टी वान समूहले माडी नगरपालिका–२ को पौबारीमा गैरकानुनीरुपमा जमिन खण्डीकरण गरेको भन्दै माओवादीले सो जग्गा कब्जा गरेको हो । शनिबार दिउँसो १ बजे झण्डा गाडेर जग्गालाई कब्जा गरेको जनाएको हो ।अभिनेता तथा […]
धेरै मानिस आफ्नो बढ्दो तौलका कारण तनावमा हुन्छन् र यसलाई कम गर्नका लागि विभिन्न तरिका अपनाउने गर्छन् । तर थोरैलाई मात्रै थाहा छ कि डाइटमा थोरै परिवर्तन गरेर निकै सजिलै तौल घटाउन सकिन्छ । केही फलफूल र सागसब्जीले प्रतिरोधी क्षमता बढाउनुका साथै तौल पनि नियन्त्रणमा राख्छ । यदि तपाईं आफ्नो तौल कम गर्ने कोसिसमा हुनुहुन्छ […]
July 31, 2021 autherLeaveaComment on मलेसियामा रहेका मोदनाथ तिमिल्सिनाको घरमा पुग्दा श्रीमती र छोरा यस्तो अवस्थामा भेटिए हेर्नुहोस्
मलेसियामा रहेका मोदनाथ तिमिल्सिनाको घरमा पुग्दा श्रीमती र छोरा यस्तो अवस्थामा भेटिए हेर्नुहोस् मलेसियामा रहेका मोदनाथ तिमिल्सिनाको घरमा पुग्दा श्रीमती र छोरा यस्तो अवस्थामा भेटिए हेर्नुहोस् यो पनि पढ्नुहोस्। झापा जिल्ला दमक नगरपालिका घर भएकी मनिषा तामाङ ले आफू १४ वर्षको हुँदा मिलन तामाङसँग बिहे गरेकी थिइन्।उनी अहिले मात्र २२ वर्षकी भइन् र उनका तीन […]
July 31, 2021 autherLeaveaComment on भर्खरै आयो ३ करोड नेपालीको र”गत उम्लिने खबर, बिदेस हेनेका १ को भारती SSB ले महाकालीमा बगाइदिए, थुक्क. (भिडियो हेर्नुहोस्)
भर्खरै आयो ३ करोड नेपालीको र”गत उम्लिने खबर, बिदेस हेनेका १ को भारती SSB ले महाकालीमा बगाइदिए, थुक्क. (भिडियो हेर्नुहोस्) भर्खरै आयो ३ करोड नेपालीको र”गत उम्लिने खबर, बिदेस हेनेका १ को भारती SSB ले महाकालीमा बगाइदिए, थुक्क. (भिडियो हेर्नुहोस्) भिडियो हेर्नुहोस् यो पनि पढ्नुहोस्। अनिता खडका र विनोद खडका यो जोडीलाई नचिन्ने सायदै कम […]
July 31, 2021 July 31, 2021 autherLeaveaComment on ‘युवराज लाई इ’ज्जत दे’ भन्दै चक्र पथमा सम`र्थकले ज’लाए टायर !
शुक्रबार साँझ महाराजगञ्जस्थित नारायणगोपाल चोकमा शाह र प्रहरीबीच विवाद भएको थियो । हेल्मेट नलगाई मोटरसाइकलमा सवार शाहलाई प्रहरीले समातेको थियो । पारसले त्यसक्रममा प्रहरीलाई छोड्न भनिरहेको सार्वजनिक भएको भिडिओमा सुन्न सकिन्छ । शुक्रबार साँझ काठमाडौंको महाराजगञ्ज चोकमा ड्युटीमा रहेका ट्राफिक प्रहरीसँग उनले वि वा द गरेका थिए । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा स्रोतका अनुसार हेल्मेट […]
ग्रामिण क्षेत्रमा आय आर्जनको स्रोत बन्दै निगुरो
July 31, 2021 autherLeaveaComment on ग्रामिण क्षेत्रमा आय आर्जनको स्रोत बन्दै निगुरो
विराटनगर । जंगलमा उम्रिने निगुरो मोरङको उत्तरी ग्रामिण क्षेत्रका निम्नबर्गका बासिन्दाका लागि आयआर्जनको माध्यम बन्ने गरेको छ। मोरङको उत्तरी ग्रामिण क्षेत्रका निम्न वर्गका बासिन्दाले सागको रुपमा भान्सामा प्रयोग हुने निगुरो टिपेरै नुन भुटुनको जोहो गर्दै आएका छन्। उर्लाबारी नगरपालिका र मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने डूम्रेको जंगलमा दिनहुँ निगुरोको साग टिप्ने गरिन्छ। मोरङको उत्तरीक्षेत्रमा अवस्थित यो […]
July 31, 2021 autherLeaveaComment on आज राती १२ बजे देखी सबै बन्द।सार्वजनिक सवारी चल्न पनि बन्द?
आउँदो शनिबार रातिदेखि लागू हुनेगरी सीसीएमसी झापाले जारी गरेको आदेशअनुसार सबै प्रकारका सवारीसाधनमा निषेध गरिएको छ ।डिसीसीएमसीको निर्णयअनुसार पूर्वपश्चिम राजमार्गमा भने सार्वजनिक सवारी साधन चल्नेछन् । तर, तोकिएको स्थानबाहेक अन्य स्थानमा रोक्न नपाउने भनिएको छ ।यस्तै, अत्यावश्यकका औषधि पसल र इन्धनका पसलबाहेक सबै प्रकारका पसलहरु बन्द हुनेछन् भने तरकारी, दूधजन्य र मासुजन्य पसलहरु बिहान ६ […]
July 31, 2021 autherLeaveaComment on यी हुन् ‘द भ्वाइस अफ नेपाल’ का उत्कृष्ट ४ प्रतिस्पर्धी, को बन्ला त विजेता ?
द भ्वाइस अफ नेपाल दर्शकमाझ सर्वाधिक लोकप्रिय रियालिटी शो हो । अडिसन राउण्डदेखि नै दर्शकले भ्वाइसलाई निकै माया दिइरहेका छन् । यसैबिच द भ्वाइस अफ नेपाल सिजन ३ का उत्कृष्ट ४ प्रतिस्पर्धी छानिएका छन् । गएराति भएको सेमिफाइनलमा चार वटा टीमका एक–एक जना प्रतिभाहरु ग्राण्ड फिनालेमा प्रवेश गरेका छन् ।सबैभन्दा कडा प्रतिस्पर्धा मानिएको टीम प्रमोदबाट […]